I-Apartment Soul yaseSiberia (metro, embindini wesixeko)
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguОльга
I-Soul of Siberia Apartments ifumaneka kwi-Jet complex, ecaleni kwesikhululo sikaloliwe kunye ne-metro, kufuphi neziko kunye nezona zinto zikhangayo zaseNovosibirsk.
Ifulethi linayo yonke into ekuncedayo: ibhedi ephindwe kabini enomandlalo okhululekileyo, eyona ifreshi, ilinen yebhedi eneayini kunye neetawuli. Ukuhlwa kwakho akuyi kulibaleka kwizandi zeerekhodi ezindala, onokuthi uziphulaphule kwi-turntable yanamhlanje. Ikhitshi igcwele zonke izixhobo eziyimfuneko kunye nezixhobo. Igumbi lokuhlambela lineshawa, umatshini wokuhlamba, isixhobo sokomisa iinwele, ijeli yeshawa, ishampu, amazinyo kunye neseti yokucheba. Isantya esiphezulu se-intanethi, iWi-Fi, iTV yedijithali. Sibeka iliso kucoceko lwamagumbi ethu ngononophelo olukhulu, sinikela ingqalelo kuyo yonke imiphezulu kunye nezinto ezincinci.
4.89 ·Izimvo eziyi-44
Ummandla umi kwicala lasekunene loMlambo i-Ob ecaleni komgaqo kaloliwe. Ukusuka emantla, umda wesithili wazoba ngowe-1940 ecaleni kwesitrato. I-Nogin kuloliwe ngokumalunga nokusekwa kwesithili saseZaeltsovsky. Emazantsi nasempuma, imida kwiSithili esiseMbindini ecaleni kongqameko lwebhulorho kaloliwe phezu koMlambo i-Ob kunye neSt. ISoviet (yayesakuba yiKhabhinethi). Entshona - ecaleni komlambo i-Ob - imida kwisithili saseLeninsky.
KwiSithili saseZheleznodorozhny kukho iNovosibirsk State Conservatory ebizwa ngegama Glinka, Siberian State University of Water Transport, Faculty of Art and Graphics, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk Law Institute (isebe leTSU), Novosibirsk State Theatre Institute, amaziko emfundo ephakamileyo akhethekileyo: isikolo sentsebenziswano yobugcisa, ikholeji yezemali kunye nebhanki, isikolo lwezempilo isikolo kuphela ezizisekondari ngaphaya Urals zomculo ezizodwa